बुधबारसम्म बर्षा हुने, यस्तो छ ३ दिनको मौसम ! - PUBLICAAWAJ
बुधबारसम्म बर्षा हुने, यस्तो छ ३ दिनको मौसम !
प्रकाशित : सोमबार, बैशाख ३०, २०७६१३:४८ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौँ, आईतबार बर्षासंगै खसेको चट्याङले सात जना घाइते भएका छन् । आज सोमबारको मौसममा पनि खासै सुधार भने देखिएको छैन ।
नरोकिएको बर्षा र क्षण भर मै बदलिरहने मौसमले हामी आजित भैसकेका छौँ । काठमाडौं उपत्यकामा आइतबारको तुलनामा सोमबार झन्डै २ डिग्री तापक्रम घटेको बुझिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा आईतबारको न्यूनतम तापक्रम १४.८ डिग्री र उच्चतम तापक्रम ३२.२ डिग्री थियो भने सोमबारको न्युनतम तापक्रम १३ डिग्री मापन भनेको छ र उच्चतम तापक्रम पनि घट्ने अनुमान छ ।
जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा उपत्यकामा ८ मिलिमिटर पानी परेको र सोमबार अपरान्हपछि वर्षा हुनेछ ।
महाशाखाका मौसमविद् सुवास रिमालले भने, ‘ भूमध्यसागरमा बनेको न्यूनचापीय प्रणालीले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत हुँदै नेपाल पसेको छ । धेरै बलियो प्रणाली त छैन तर बुधबारसम्म बादल र छिटफुट वर्षाको सम्भावना छ । ‘
आउनुहोस् जानौँ ३ दिनको मौसम :
सोमबार, वैशाख ३०
देशका अधिकांश भू-भागमा सामान्य बदली रही पश्चिमका थोरै स्थानहरुमा र मध्य र पूर्वका केही स्थानहरुमा मेघ गर्जन वर्षाको सम्भावना रहेको छ । मध्य क्षेत्रका केहि स्थानहरूमा र पूर्वी तराईमा हावाहुरीको पनि सम्भावना छ । राती देशभर आंशिक देखि सामान्य बदलि रही पश्चिमका पहाडी भू-भागहरू र मध्य र पूर्वका केही स्थानहरुमा मेघ गर्जन, हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
मंगलबार, वैशाख ३१
देशभर आंशिक देखि सामान्य बदलि रही थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन, हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
बुधबार, जेष्ठ १
देशभर आंशिक देखि सामान्य बदलि रही पश्चिमका थोरै स्थानहरुमा र मध्य र पूर्वका केहि स्थानहरुमा मेघ गर्जन सहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ राती आंशिक देखि सामान्य बदलि रही देशका पहाडी भू-भागमा मेघ गर्जन सहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
अर्थाभावका कारण दलित समुदायका बालबालिका पढ्न पाएनन्
आँधीहुरी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारद्वारा आधुनिक चुल्हो र सोलर उपलब्ध गराइने !
भरतपुर महानगरमा रेनु दाहाललाई ९० मतको अग्रता
सर्पले टोकेको बिरामी लिएर अस्पाताल जादै गरेको बस र ट्रक आपसमा ठोक्किँदा एकको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइते